Akụrụngwa Nchedo Nchekwa na Factlọ Ọrụ - Ndị Na-emepụta Nchekwa Nchekwa onwe nke China
Automobile Polarized Arc Anti-glare iko 1919
Igwe enyo enyo enyo, ihe ngosi ụgbọ ala, enyo na-egbochi ọkụ, iko iko na-acha anyanwụ, belata nchapụ anwụ, meziwanye nghọta anya, ma gbochie ikpuru ìsì 1919SBT
Ihe eji eme kwa ụbọchị-sunshade polarizer: meziwanye nchapu nke anyanwụ, nchapu nke ọkụ dị elu, na-enyocha ọkụ nke ọma, melite ọhụụ, na-enyocha ọkụ kpọmkwem, pụọ na mmebi ọkụ siri ike, belata mpaghara ikpuchi nke ọhụụ, belata ihe ize ndụ nchebe, ma mee ka ịkwọ ụgbọala ghara ịdị nchebe.
Car Daily Curved kewapụrụ eke-ntigbaa iko 1919B
Dailygbọ ala kwa ụbọchị enyo enyo enyo na -eme ka ugogbe anya na - eme ka anwụ ghara ịda mma iji meziwanye ọhụụ 191BSBT
Okpokoro eserese: mee ka ìhè na-enwu gbaa, ìhè na-emerụ ahụ na nnyonye anya gbasasịa, meziwanye ìhè na-egbuke egbuke, na-egbuke egbuke dị elu, meziwanye ọhụụ, belata ntụpọ ọhụụ nke ọhụụ, belata ihe ize ndụ nchekwa, ma mee ka ịkwọ ụgbọala dị nchebe.
Daygbọala ehihie na abalị enyo enyo na-egbu egbu 0032A
Nlere anya ọkwọ ụgbọ ala, ụgbọ ala ehihie na abalị enyo na-enwu gbaa, ugogbe anya maka anwụ na-acha ọkụ, belata mbibi ọkụ, meziwanye ọhụụ nke ọhụụ, na ihe nkwụghachi azụ 0032ASBT
Abụọ kwa ụbọchị na abalị ojiji: kwa ụbọchị ọhụụ nke anyanwụ nwere ike ime ka ìhè na-enwu gbaa, na-egbuke egbuke dị elu, belata ihe ize ndụ nchebe, ugogbe anya abalị iji mee ka ìhè ahụ dị nro, nza ọkụ kpọmkwem, pụọ na mmebi ọkụ siri ike, ma belata ntụpọ anya ọhụụ.
12V Auto Air mgbapụta 2901
Auto ikuku Compressor Car ikuku mgbapụta 12V ụgbọ ala electric obere taya mgbapụta na ikanam ọkụ 2901SBT
Multi-function: ngwa mgbakwunye ikuku ngwa ngwa, dial ngosi ngosi dijitalụ, cylinder metal, nchọpụta nrụgide taya, nrụgide taya nrụpụta, ọkụ abalị, nrụgide taya nwere ike ịtọ, mgbe ịbịnyere ike ọkọnọ, nrụgide taya nrụrụ nwere ike ịmalite onu oriri, ọ kwụsị na-akpaghị aka mgbe odori.
12V Automobile Starter Power na Air Pump Integrated Machine 2137
Mberede ụgbọ ala na-amalite ike ọkọnọ, Auto Air Compressor, batrị ekwentị na igwe ikuku ikuku, 12 V nnukwu ikike 2137SBT
Multi-function: tire inflation, smart preset tire pressure, inflator ga-akwụsị ịgba ọsọ mgbe juputara ikuku, onu oriri ikuku, tufuo agbụ nke ụdọ ike, ụmụ nwanyị nwekwara ike ịrụ ọrụ n'atụghị egwu. Enwere ike iji ya dị ka isi mmalite nke ụgbọala, yana ọkụ ọkụ na ọkụ ịdọ aka na ntị.
12V Multifunctional Auto Air mgbapụta 2631
Car ikuku mgbapụta Car ikuku Compressor 12 V ụgbọ ala obere-arụ ọrụ ụgbọ ala ikuku mgbapụta, na ọkụ na ịdọ aka ná ntị ọkụ 2631SBT
Ọgba ọsọ ọsọ na nchekwa: nrụgide akụrụngwa esetịpụrụ, nkwụnye bọtịnụ na ịkwụsị. Njikwa ahụ, mgbochi mgbawa (ọ dịghị mkpa ka a chịkwaa, nkwụsịtụ akpaka zuru ezu, ka ọ dabara nke ọma na nrụgide taya dị egwu), 30-cylinder air supplement ọsọ bụ ugboro abụọ ọsọ ọsọ, naanị 60 sekọnd iji mezue onu oriri. Ọdịdị usoro a ka mma, ọnụọgụ ọnụọgụ 25L / min, zuru ezu iji mee ka ị bụrụ ọsọ ọsọ.
Ugekpọ oku na-enye nsogbu 051
Multi-ọrụ taya mgbali Nchikota ngwá ọrụ multi-ọrụ nchekwa hama ụgbọ ala ụzọ mgbapụ window emebi digital taya mgbali nlele taya mgbali nlekota table table 051SBT
Nchọpụta nrụgide Taya bụ ihe ziri ezi: a na-anabata usoro ịntanetị, akara aka na-enwe mmetụta karị, enweghị batrị dị mkpa, ọ dịghịkwa mkpa ichegbu onwe gị banyere ike agwụla. A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri na-eme ihe iji tụọ nrụgide dị n'ihu, na azụ nwere ike iji kọwaa taya.
Digital Display Stainless Steel Taya Pressure nlele 009B
Igwe anaghị agba nchara nrụgide nrụgide Nnukwu nkenke nrụgide igwe na-arụ ọrụ nlele Digital taya mgbali nlele maka ụgbọ ala nchekwa nchekwa ndụ
Multifunctional Nchikota ngwá ọrụ: Digital taya mgbali nlele + ike tungsten ígwè isi nchekwa hama + multifunctional jikọtara ngwá ọrụ.
Tungsten ígwè hama isi: High ekweghị ekwe, ike mmetụta ike, ọ nwere ike imebi elu na-enweghị ike imebi toughened iko.
High nkenke Digital Taya Pressure nlele 0902
Automobile tire mgbali monitor, elu-nkenke digital ngosi taya mgbali barometer, electronic digital deflation manometer 0902SBT
Automobile tire mgbali monitor, elu-nkenke digital ngosi taya mgbali barometer, electronic digital deflation manometer
Ngosipụta LCD dijitalụ: Dị iche na igwe ntanetị, ọgụgụ dị nwayọ na njehie buru ibu, nke ziri ezi na ọnụọgụ 2 mgbe ọnụọgụ ntụpọ, ọgụgụ a na-enwe nghọta.
Ọrụ dị mfe: pịa ike na isi valvụ ahụ ka ịlele nrụgide ahụ ma gụọ uru nrụgide ahụ.
7 Multifunctional Auto Window emebi emebi 0096
7-in-1 nchekwa ngwá ọrụ, asaa ọrụ nchekwa hama, window emebi, ụgbọ ala ụzọ mgbapụ ngwá ọrụ, ọkụ nnapụta hama, gbajiri window taya nsogbu nlele, oche eriri cutter 0096SBT
Ọrụ windo mebiri emebi: agịga nchara ígwè, ekweghị ekwe dị elu, nwere ike imebi windo ahụ ozugbo, agịga nchara ahụ ka dị ka ọhụụ mgbe ejiri ya ugboro ugboro.
Nchọpụta ihe ngosi ọkụ na-egosi ihe ngosi: Ngosipụta dijitalụ dijitalụ, ịgụ ya doro anya, lelee nrụgide taya ugboro ugboro iji hụ nchekwa ịkwọ ụgbọala.
Mini Auto Window emebi emebi PC14
Mini mberede ụgbọ ala nchekwa hama agbapụ hama agbaji window nchekwa hama window emebi oche belt cutter PC14SBT
Ngwa ngwa window na-agbaji: Enwere ike iji ya maka ụmụ nwanyị, ụmụaka na ndị agadi. Ọ nwere ike na-agbajikwa mfe mmiri n'okpuru osimiri na oge.
Akwa ekweghị ekwe: alloy striker, enweghị deformation, ọ nweghị mmebi mgbe mmetụta ugboro ugboro
Wuru na-nchekwa eriri cutter maka ngwa ụzọ mgbapụ na mberede
Vehicle-n'ịnyịnya Multifunctional ụzọ mgbapụ 0081
Car windo emebi, multi-ọrụ nchekwa hama, ọkụ na-alụ ọgụ ụgbọ ala ụzọ mgbapụ hama, ndụ na-azọpụta hama ngwá ọrụ, static eliminator, multi-ọrụ mini ngwá Nchikota 0081SBT
Ọrụ mmebi windo: Igwe-ike alloy dị elu, dị mfe imebi windo ahụ, dị mfe iji mee ihe maka ndị agadi, ụmụaka, ụmụ nwanyị na ụmụ akwụkwọ.